Cube X3 Mini Bluetooth ကြိုးမဲ့စပီကာများ ...
အစဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယိုနှင့်အသံ technique ကိုအသံနည်းပညာCube X3 Mini ကို Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့စပီကာ
Cube X3 Mini ကို Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့စပီကာ
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်မတ်လ 2020,49:11 pm တွင်
X3 Cube အိတ်ဆောင်ဘလူးတုသ်နာယက
X3 ကြိုးမဲ့ Mini ကို Cube ဘလူးတုသ်နာယက V2.1
Mini ကိုဘလူးတုသ်နာယက woofer Kalonki X3 ကြိုးမဲ့အိတ်ဆောင်သီချင်းဖွင့် subwoofer ပီ parlantes
စမတ်ဖုန်းများသည် Mini ကို 2.4GHz X3 ရေ Cube ကိုကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုစတီရီယိုနာယက
Cube Mini ကို Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့ X3
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Cube X3 Mini ကို Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့စပီကာ
X ကိုက x 13.20 5.80 4.00 စင်တီမီတာ x ကို 5.2 2.28 1.57 လက်မ x ကို
X ကိုက x 10.80 5.40 3.50 စင်တီမီတာ x ကို 4.25 2.13 1.38 လက်မ x ကို
W / O အခက်အခဲများကို≤10m
အိတ်ဆောင် Mini ကိုဘက်စုံသုံး, စတိုင်
အနက်ရောင်, အပြာရောင်, အစိမ်းရောင်, အနီရောင်, အဝါရောင်
ဘလူးတုသ် TF / Micro SD Card ကို, ဦး-disk ကို, ကိရိယာများကို Enabled
Mini ကို USB မှတ်ပါဝါတာဝန်ခံဆိပ်ကမ်း, SD ကတ်ပေါက် TF Card ကိုပေါက်
aux ရာထူးအမည်, သီချင်းများ Track, စတီရီယို
ဘလူးတုသ်, FM ရေ, လက်ကမ်းအခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများ, အသံချဲ့စက်, မိုက်ကရိုဖုန်း, SD ကတ်ဂီတ Play, TF Card ကိုဂီတ Play, Volume ကိုထိန်းချုပ်ရေး, Wi-Fi ချိတ်ဆက်
iPhone, Laptop ကို, မိုဘိုင်းဖုန်း MP3, MP4, MP5 PC, Tablet ကို PC မှာ, TF / Micro SD Card ကို
1 X3, ကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုနာယက x 1 x ကိုက USB, Power Cable ကို, ပေး Audio Cable ကို 1 x, 1 အင်္ဂလိပ်နှင့်တရုတ်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးအသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ် x
Cube X3 Mini ကို Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့နာယကဗီဒီယိုများ
Счастливец - 2019 10 ဇွန်
Смоднымиэлегантнымвнешнимвидом, X3 беспроводнойдинамикဘလူးတုသ်будетвыполнятьвсетребования, необходимыеиздинамика, поддержкаဘလူးတုသ် / линиивсвязи, FM ရေ - радио, карты TF громкойсвязи, тоесть, онможетбытьиспользовандлядомашнегокинотеатра, портативныйаудио сценаи т.д. плеер, мобильныйтелефон, караокеплеер, компьютер, Особенности - Спередовойဘလူးတုသ်чипдекодированияаудио, поддержкавводаивыводавсехустройствဘလူးတုသ်။ - Поддержкафункции FM ရေ, можнонайтирадиостанциивещанияавтоматически။ - ВключаетсебяПривет-Fi ကိုакустическихчтобыобеспечитьчеткоеияркоекачествозвука။ - Поддержкаကို USB икарт TF (невходитвкомплект) Гбдо 16 ။ - Поддержкабеспроводнойлиниивဘလူးတုသ်။ - Функцияручнойсвободный, встроенныймикрофон, поддержкателефоннойсвязи။ - Можноподключитьтелефон, ноутбук, планшетныйкомпьютер, телевизорнепосредственноспариваниеဘလူးတုသ်, рабочеерасстояниенаходитсявпределах 10 м။ - 1000pcs CTN огниисправленныхвдинамике။ - Поддержкапеснитрек။ невыявил။
Sheldon501 - 2019 10 ဇွန်
ယခုတွင်ငါသည်တစ်ပါတ်ကျော်ကဒီစပီကာကို အသုံးပြု. ခဲ့တာနဲ့ကျွန်မအကြောင်းကိုအချို့သောကောင်းသောအရာကိုတွေ့သွားပါပြီနှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာအချို့မကောင်းတဲ့ဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ 1 ။ အရည်အသွေးအ Build: င်း၏အချို့စျေးပေါပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့သို့သော်၎င်း၏မျှမျှတတခိုင်မာတဲ့ပြုလုပ်မယ့်ကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်မိုနိုဖြစ်ပါတယ်ဒီအနိမ့်စျေးနှုန်းမှာယခုထိုမျှလောက်ဘလူးတုသ်စပီကာအပေါ်တစ်ဦးရက်အတွင်းမြင်ဘူးအဘယ်မှာရှိစပီကာကိုနားထောငျဖို့သတ္တုရှေ့တွင်ရှိနေပါသည်။2။ interfaces နှင့်ဆိပ်ကမ်းများ: အဆိုပါခလုတ်ထိပ်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးနေကြတယ်, မိုက်ခရို USB တစ် TF / SD ကဒ်ကို USB 2.0 ဆိပ်ကမ်းကိုမြန်ဆန် on / off Powering အဘို့ပါဝါ switch သည်နှင့်တစ်ဦးလက်ပေါ်ချပြီးများအတွက်အနည်းငယ်ကွင်းဆက်ကိုထောက်ပံ့ဘယ်ဟာနောက်ကျောတဝိုက်ရှိဆိပ်ကမ်းများအဘို့ သူတို့ကိုတီးဝိုင်းသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို။3။ နောက်ဆုံးကောင်းသောအခိုက်ကစားတဲ့အခါမှာ 1000 နှင့် mAh ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တစ်ဦးကဖြုတ်ဘက်ထရီ။4။ အသံ: ဤအရာမျှမျှတတအသံကျယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကိုငါ့အကို PC ပေါ်မှာ Mey ကို USB စပီအောင်နားမထောင်ဖို့ကောင်းတဲ့ဘေ့မဟုတ်ရွှံ့အသံနှင့် cleat ယေဘုယျတစ်ကစားကစားစရာများကဲ့သို့အသံထားပါတယ်ငါသည်ဤသင်အခြားသူများထက်ပိုပြီးရစျေးနှုန်းအဘို့အကောင်းတစ်ဦးသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်ပြောချင် နည်းနည်းပိုပြီးငါသည်ဤစပီကာနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်သောဖော်ပြထားခြင်းတော့ဒါကကုန်ကျစရိတ်မကောင်းတဲ့အဘို့ယခုဖြစ်ပါတယ်။ 1 ။ ပါဝါ switch ကိုသင်က "2 အပေါ် t ကို switch ကိုအနိုင်ရခဲ့တစ်အိတ်ထဲမှာန်းကျင်တင်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်ဒါ '' s ကိုဤနည်းကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်ဖြစ်ခြင်းပြောင်းနည်းနည်းခဲယဉ်းသည်။ အချိန်အားသွင်းသည့် mah 's ကြောင့်အားသွင်းဖို့3နာရီကိုယူ shouldnt မြင့်မားမဟုတ် သိ. လွန်းနှေးကွေးသည်။3။ သင်ရုံအနည်းငယ်ထက် ပို. ဘေ့အသံကိုကြားပါလိမ့်မယ်အသံအရည်အသွေးအတွက်နည်းနည်းပိုပြီးအပူချိန်အသုံးပြုနိုင်တယ်။ ယေဘုယျအားစျေးနှုန်းအဘို့အကြောင်းကိုတိုင်ကြားတာတပင်မျှမဖွင့်
Vladyslav - 2019 10 ဇွန်
Низкаяцена, компактныеразмеры, хорошийзвук (длясвоихразмеровонадовольногромкая, азвучаниечистое) подходитбатареяотНокии (легкозаменить, еслисдохнет) ။ Многофункциональность: можноподключатьикартуသော microSD, USB မှတ်ифлешку, илинейныйвход, иподключениечерезблютуз (нокачествозвукачерезблютузхуже, чемвпервыхтрёхслучаях) ။ Удобното, чтоиприподключенииблютузудоступнопереключениетрековипаузаскнопокколонки, анетолькостелефонаမူ။ Нобольшевсегомнепонравилосьто, чтопривыключенииколонкиидажевытягиваниибатареисохраняетсятоттрек, накоторомвпрошлыйраззавершилосьвоспроизведение! Этооченьактуально, еслинафлешке 450 треков! အနိမ့်သောစျေးနှုန်း, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစား, ကောင်းသောအသံသည် (၎င်း၏အရွယ်အစားထိုသို့အတော်လေးကျယ်လောင်သည် ဖြစ်. , အသံသည်စင်ကြယ်၏), Nokia ကကနေဘက်ထရီ (အဲဒါကိုသေလျှင်အစားထိုးလွယ်ကူပါတယ်) သင့်တော်သည်။ Multifunctionality: သင်ကာ microSD card ကို, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးက USB flash drive ကို, သို့မဟုတ် aux connect, ဒါမှမဟုတ်ဘလူးတုသ်မှတဆင့်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက် (သို့သော် Bluetooth မှတဆင့်အသံအရည်အသွေးကိုပထမသုံးကိစ္စများတွင်ထက်ပိုဆိုးသည်) နိုင်ပါတယ်။ ဘလူးတုသ်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေ, ကဖုန်းမှမဖြောင့်စပီကာပေါ်မှခလုတ်ကနေအပုဒ်များနှင့်ခေတ္တနားပြောင်းဖြစ်နိုင်၏။ သို့သော်အပေါင်းတို့၏အများဆုံးကိုသင်တို့အားငါစပီကာကို turn off နဲ့တောင်မှဘက်ထရီဆွဲထုတ်သောအခါကနောက်ဆုံးအချိန်ပြန်ဖွင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်ဘယ်ဟာပေါ်လမ်းကြောင်းကနေစတင်သည်ဟူသောအချက်ကိုကြိုက်တယ်! အဆိုပါ flash drive ကိုအပေါ် 450 ပုဒ်ရှိပါတယ်လျှင်ဤသည်အလွန်အရေးကြီးသောပါ! Линейныйвыходсовмещенсразъёмомзарядки။ Былобылучше, еслибыбылотдельный 3,5 ммлинейныйвыход။ Потомучтоесликомплектныйкабельсломается, заменуяемуврядлинайду။ aux output ကို socket charging နှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့သီးခြား 3,5 မီလီမီတာ aux output ကိုရလိမ့်မည်။
Elephone ele - Box ကို 4.1 Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့စပီကာ
Xiaomi က Mi ဂိမ်းနားကြပ်နားကြပ်
AEC ကို BQ - LED မီးအလင်းရောင်နှင့်အတူ 615 PRO Bluetooth ကိုကြိုးမဲ့စပီကာ
Xiaomi ကတီဗီ Soundbar ပီအမျိုးအစားတီဗီ, အိမ်ရုပ်ရှင်ရုံစနစ် (33 လက်မ 84cm)
360 S6 Pro LDS Lidar လေဆာသွားလာမှုစိုစွတ်။ ခြောက်သွေ့ 5200mAh စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက် 53dB ဆူညံသံအနိမ့် RF Omnirectional + APP Dual Remote Control 2200Pa စုတ်ယူခြင်း
360 S6 Pro LDS Lidar လေဆာသွားလာမှုစိုစွတ်သောနှင့်ခြောက်သွေ့သော 5200mAh စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက် 53dB Low Noise RF ...
KUU K2 Intel Celeron J4115 ပရိုဆက်ဆာ ၁၄.၁ လက်မ IPS ဖန်သားပြင်သတ္တု Shell Office Notebook 14.1GB RAM Windows 8 10GB / 256GB SSD
KUU K2 Intel Celeron J4115 ပရိုဆက်ဆာ ၁၄.၁ လက်မအရွယ် IPS ဖန်သားပြင် All Shell Office Notebook 14.1GB RAM ...
XIAOMI MIJIA Mi အိမ်သုံးကြိုးမဲ့ဆေးကြောခြင်းအတွက်စက်ရုပ် Mopping စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက် Mweeping 1PA ဆိုင်ကလုန်းစုတ်ယူခြင်း Smart Planned WIFI
XIAOMI MIJIA Mi အိမ်သုံးကြိုးမဲ့ဆေးကြောခြင်းအတွက်စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက် Gopping Mping 1PA ဆိုင်ကလုန်း ...
Hubsan Zino2LEAS 2.0 GPS 8KM FPV 4K 60fps UHD ကင်မရာပါ ၀ င်သည့် 3-axis Gimbal RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Quadcopter RTF 33mins ပျံသန်း 3800mAh ဘက်ထရီအွန်လိုင်း
Hubsan Zino2LEAS 2.0 GPS 8KM FPV 4K 60fps UHD ကင်မရာ 3-axis Gimbal RC Drone Quadcopter RTF ...
ILIFE V5s Pro ဖုန်စုပ်စက် Robot Sweep Wet Mop အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆံပင်အတွက်အလိုအလျောက်အားသွင်းခြင်းအစွမ်းထက်စုတ်ယူခြင်း
ILIFE V5s Pro ဖုန်စုပ်စက် Robot Sweep Wet Mop အလိုအလျောက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆံပင်အတွက်အားသွင်းခြင်း ...
VIOMI SE ဖုန်စုပ်စက် 2200Pa LDS အသိဥာဏ်ရှိသောလျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်ရေးတာ့ခ်ယူအီးအီးလ်ပလပ်ဂတ် ၅ မြေပုံ ၇ ရက်ချိန်း
VIOMI SE ဖုန်စုပ်စက် 2200Pa LDS အသိဥာဏ်ရှိသောလျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်ရေးတာ့ခ်ယူအီးယူပလပ်ဂတ် ၅ မြေပုံ ၇ ပါ ...
၁၀.၁ လက်မအရွယ် Android4MT10.1 Octa Core 10.0GB RAM 6771GB 6mAh ဘက်ထရီဖြင့်အသုံးပြုသော CHUWI HiPad X 128G ခေါ် Tablet
၁၀.၁ လက်မအရွယ် Android4MT10.1 Octa Core 10.0GB RAM 6771GB 6mAh တက်ဘလက်ဖုန်းခေါ်ဆိုသော CHUWI HiPad X 128G ...
Roborock S5 Max လေဆာရောင်ခြည်သုံးစက်ရုပ်စိုစွတ်သောခြောက်သွေ့သောဖုန်စုပ်စက်အခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်း Roborock3Heads Usb Charging Line
Roborock S5 Max လေဆာရောင်ခြည်သုံးစက်ရုပ်စိုစွတ်သောခြောက်သွေ့သောဖုန်စုပ်စက်အခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်း Roborock3Heads ...
Xiaomi Mi Band5Smart Wristband ၁.၁ လက်မဖန်သားပြင်သံလိုက်အားသွင်းခြင်းဖြင့်လက်ပတ်ကြိုး ၁၁ အားကစားနည်းများ Remote Camera Bluetooth 1.1 Global Version
Xiaomi Mi Band5Smart Wristband ၁.၁ လက်မဖန်သားပြင်အားသံလိုက်အားသွင်းခြင်းအားကစား ၁၁ ခုပါ ...
ZHIYUN တရားဝင် Cinepeer C11 3-Axis ဖုန်းလက်ကိုင် Gimbal Stabilizer Dolly Zoom Panorama Samsung Samsung Xiaomi Huawei Vivo စမတ်ဖုန်း
ZHIYUN တရားဝင် Cinepeer C11 3-Axis ဖုန်းလက်ကိုင် Gimbal Stabilizer Dolly Zoom Panorama ...